Space Marshals 2 tsy misy afa-tsy amin'ny 0,99 euro | Vaovao IPhone
Ignacio Sala | | Lalao IPhone, fivarotana
Iray amin'ireo lalao nahatratra ny App Store tato anatin'ny taona vitsivitsy ny Space Marshals saga, lalao iray izay tsy maintsy hitetezantsika manerana ny vahindanitra. Space Marshals 2 dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 5,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona izany latsaky ny iray euro, 0,99 euro. Ity tapany faharoa amin'ny Space Marshals tany am-boalohany ity dia scooter taktika ambony ambany izay mametraka antsika indray amin'ny kiraron'i Burton manam-pahaizana manokana hiady amin'ireo jiolahy rehetra ao amin'ny vahindanitra. Amin'ny maha-mpitifitra taktika anao dia mila manandrana mieritreritra ny hetsika tsirairay ianao alohan'ny hanoratanao sary ary manomboka hitifitra hisamborana ireo fahavalo.
Mila miafina isika mba hisorohana ny fanafihana. Mila mametaka ny fahavalontsika isika alohan'ny hanakanany antsika. Ny tombony ho azontsika dia avy amin'ny fitaovam-piadiana ho azontsika toy ny grenady fanaparitahana, grenady manajamba, drôna, tilikambo, toeram-pitrandrahana akaiky ... Raha ny fanafihana mangingina dia fitaovam-piadianay io. afaka Mampiasà fanelingelenana hampisarahana ny fahavalontsika amin'ny fanesorana azy tsirairay ka ny vondrona dia kely kokoa sy mora esorina.
1 Endri-javatra an'ny Space Marshals 2
2 Space Marshals 2 pitsopitsony
Endri-javatra an'ny Space Marshals 2
Mpitifitra ambony ambany tetika.
Sary HD manaitra sy kanto ary fametahana metaly.
Asa fitoriana 20 miaraka amin'ny valisoa azo avy amin'ny fampisehoana. Mijery anao ny TAMI!
Safidy sy fitaovam-piadiana marobe. Fitaovam-piadiana maherin'ny 70.
Ankolafy maro hiady… na hampifandrafy azy ireo.
Fanohanana mpanara-maso MFi (mitaky fisanganana maharitra)
Mety hamonjy lalao amin'ny iCloud.
Space Marshals 2 pitsopitsony
Voatondro ho an'ny 12 taona sy miakatra.
Mifanaraka amin'ny iPhone 5s mandroso, iPad Mini 2 mandroso, ny maodely iPad Air sy iPad Pro rehetra ary koa ny iPod touch amin'ny taranaka faha-XNUMX.
Mitaky farafahakeliny iOS 8.4 na taty aoriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Space Marshals 2 tsy misy afa-tsy amin'ny 0,99 euro ihany
Tsy azoko xk izy ireo dia tsy nivoaka ho an'ny apple tv izay toerana hilalaovany tena tsara.